कोरोना र क्वारेन्टाइन सामाजिक बुझाइका सवालहरु – रोल्पा समाचार
२०७६ चैत्र २२, शनिबार ०२:०२ गते
रोल्पा समाचारदाता on २०७६ चैत्र २२, शनिबार ०२:०२ गते
कोरोना भाइरसले विश्वभर जनजिवन प्रभावित बनाइरहेकोे छ । यदाकदा जोक्सहरुमा रमाउनेको पनि ठूलै जमात छ । उनिहरु भन्छन सबैलाई लकडाउनमा राखेर कोरोना बिश्व भ्रमणगरिरहेको छ । हो यो जोक्स मात्र होइनको दिन सम्म विश्वलाई हेर्नेहो भने १९५ देशका सम्म १० लाख जनाभन्दा बढि संक्रमितभएका छन । संक्रमितमध्ये २ लाख १५ हजार ५ सय १८ जनाले कोरोनालाई जितेर निको भएका छन् भने ५० हजार ३ सय २७ जनाभन्दा बढिले कोरोनाबाट ज्यानगुमाई सकेका छन । अझै ७ लाख १७ हजार ७ सय ९९ जनामा यो भाइरस रहेको तथ्याङ्कले जनाउँछ । यतिबेला कोरोनाको महामारी बिश्वका शक्ति राष्ट्रहरुले सामना गर्न सकिरहेका छैनन् । चिनको वुहान प्रान्तमा सर्बप्रथम देखिएको यो कोरोना भाइरसबाट क्षति बेहोर्ने माख देश इटली अगाडि देखिन्छ । विश्व शक्ति देशहको दम्भलाई कम्जोर बनाइरहेको समयमा नेपालमा यसबाट हुनसक्ने संभावित प्रभावलाई मध्यनजर गरेर बिभिन्नकार्यहरु गरिदै आएको छ । संघिय सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन मालिदै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबै आ–आफ्नो प्रयासलाई तिब्र गतिमा अगाडि बढाइरहेका छन् । कुनै पनि काम गर्दा आलोचना आउनु स्वभाविकहो । काम गर्दा सकारात्मक प्रतिक्रिया आउछ कि त नकारात्मक प्रतिक्रिया यि दुबै एक सिक्काका दुई पाटा हुन । यसलाई स्वभाविकरुप मालिदै सुधार गर्दै लिने क्रमजारी रहेको छ र रहने छ ।
नेपालमा कोरोनाबाट हुनसक्ने प्रभावलाई मध्यनजर गरेर ययको प्रतिकाईकोलागि लकडाउनको नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ साथै अन्य तयारीका गतिविधिलाई पनि तिब्रता दिइएको छ । नेपाल संघिय शासन प्रणाली अवलम्वन गरिसकेकाले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकाले आ–आफ्नो प्रयास तथा क्षमता अनुसार तयारी थालेका छन् । यसको तयारीकै क्रममा हेल्प डेस्क स्थापनागरी सामान्य स्वास्थ्य चेकजाँच, होम क्वारेन्टाइलाइ प्राथामिकिकरण, प्रदेश स्तरिय कोरोना अस्पताल तथा आइसोलेसनको ब्यवस्था, जिल्ला स्थरमा कोरोना अस्पताल तथा आइसोलेसनको ब्यवस्था, स्थानीय क्वारेन्टाइनको ब्यवस्था, संभावित औषधि, सुरक्षा सामाग्रिको खरिद तथा आपूर्ति इत्यादि प्रयास भएका छन् । क्वारेन्टाइन शब्द सुन्दा आम नागरिकमा चेतनाको कमिका कारण त्रसितभएको पाइन्छ । अहिले मिडियामा आएका समाचारलाई नै हेर्नेहो भनेक्वारेन्टाइन मा बस्न नमानेर भागेको समाचार चर्चामा नै रहे । अस्तिमात्र बिकट हिमाली जिल्ला डोल्पामा एउटा समाचार प्रकाशित भयो “क्वारेन्टाइनमा राख्नखोज्दाआत्माहत्या प्रसास” । यि समाचारलाइ हेर्दा के देखिन्छ भने आमनागरिकमा स्वास्थ्य सेवा त परै जावस स्वास्थ्य शिक्षासम्म उनिहरुको पहुँच छैन । यसलाई सार शब्दमा भन्नु पर्दा सरकारी तथा गैर सकारी निकाय, आम चेतनशिल बर्गले यसबारे जनस्तरसम्म चेतनामुलक गतिविधिलाई प्राथामिकतानदिएको र आम नागरिकलाई बुझाउन नसकेको कुरा पक्का छ ।
पैसा सबै थोक होइन तर पनि यो बिनाकाम पनि चल्दैन । इटलिले कोरोना बाट भएको क्षेति र त्यहाको दर्दनाक दृष्य हेर्ने हो भने मन कस्को नरोला र ? हेलिकप्टरबाट पैसा फ्याकिएर बाटो घाटो जताततै पैसा पैसा फालिएको दर्दनाक तस्विर देख्न सकिन्छ । नेपालमा यहि सारलाई बिश्लेशनगर्ने हो भने हामिकतातिर जादै छौ, हामी के गरि रहेका छौ ? हाम नेपालिको चेतना स्तर कता दौडिरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । तसर्थ हामीले गर्ने आलोचनामा जहिले पनि पैसा सघ जोडिएर रहने गर्छ । यहि तथ्यलाई पनि नेपालीले जोक्स नै बनाए । लकडाउनमा घरभित्र बस्न नमान्नेहरुलाई इटलीमा पठाइदेउ, कोरोनाबाट बचे छन भने बाटोमा फ्याकिएका पैसा बटुलेर घर फर्कलान । के हाम्रो अवस्था यतै तिर गएको हो त ? होइन भने अवहामी कोरोनाबारे थालिएका पहल कदमिलाई सचेतना गतिविधि मार्फत सबैलाई बुझाउन जरुरी देखिन्छ ।
कोरोनाको प्रकोप सधै सबैको मुखमा झुण्डीएको क्वारेन्टाइन शब्द के हो त ? क्वारेन्टाइन शब्द क्वारन्टेनाबा आएको हो । यो शियन भाषाको शब्द हो । यसको अर्थ ४० दिन भन्ने हुन्छ । यूरोपमा प्लेग रोगका कारण ३० प्रतिशत जनताको मृत्यू भएको थियो । क्राए शियाले आफ्नो देश आउने जहाज र त्यसमा रहेका मानिसलाई एउटा दिपमा ३० दिन सम्म अलगअलग रहन आदेश दिएका थिए । यो ३० दिनको अवधिमा कुनै ब्यक्तिमा प्लेगका लक्षण त छैन भनेर हेरिन्थ्यो । जसलाई ट्रेन टाइन भनिन्थ्यो पछि यसको समय बढाएर ४० दिन पुग्यो र यसको नाम क्वारेन्टाइन रहन पुग्यो । जुन समयमा प्लेग रोगीको कम्तीमा ३७ दिनमा मृत्यू हुने गर्दथ्यो । ४० दिनक्वारेन्टाइनको असर स्पस्टरुपमा देखिएको थियो । क्वारेन्टाइनको प्रयोगबाट यूरोपमा १४९२ माबिफर, १९ औ शताब्दीमा स्पेन मायलो फिबर र हैजा रोक्न ठूलो मद्धत पाएको थियो ।
अहिले हामी सबैको जनजिब्रोमा झुण्डीएको शब्द पनि त्यहि हो । कोरोना भाइरस मानिस वाजिवित प्राणि भित्र प्रवेश गरिसके पछि निश्चित दिनसम्मयसको असर रहने गर्छ अर्थात प्राणिको शरिर भित्रजिवित रहेर अरुको शरिरमा सर्न सक्ने अवधिभनेको १४ दिनहो । यो समयमा मानिस वा प्राणि अरु कसैको सम्पर्कमा नरहने एक्लै बस्ने भन्ने हो । जसका कारण कोरोना महामारीबाट हुन सक्ने क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ । अर्थात कोरोना एक ब्यक्तिबाट अर्को ब्यक्तिमा सर्न पाउदैन । कोरोना संक्रमित मानिसमा प्रबेश गर्ने बित्तिकै लक्षण देखिन्छ भन्ने हँुदैन । यो त प्राणि जगतमा प्रवेश गरेको केहि दिनसम्म लक्षण देखिदैन । यसले प्राणिजगतमा आफ्नो बृद्धि विकास गर्दै जान्छ । जवहाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिकमजोर हुदै जान्छ अनि मात्र यसका लक्षण तथा चिन्हहरु देखिने हुन । कसै कसैमा त यो भाइरस शरिरमाप्रबेश भएर सन्चो हुदा सम्म पनि त्यस्तो केहि लक्षण चिन्ह देखिदैन । तसर्थ यसको असरलाइ कम गर्ने, यसबाट बच्नको लागि हालसम्म औषधिपत्ता समेत नलागेकोले कोरोना भाइरस बाट बच्न र बचाउन, एक ब्यक्तिमा रहेछ भने अर्को ब्यक्तिमा सर्न नदिन क्वारेन्टाइनमा रहने भनेको हो । यसबाट आफु पनि सुरक्षित रहिन्छ भने अन्य परिवारका सदस्यलाई पनि कोरोनाको संक्रमण हुनपाउदैन ।
नेपाल सरकारले क्वारेन्टाइन संचालनकोलागि स्ट्यान्डर मापदण्ड तयार गरेको छ । जहाँ बसाइ ब्यवस्थापन, सरसफाइ, खानपिन, सुरक्षा, उपचारको लागि स्वास्थ्यकर्मी लगाएतको ब्यवस्थागरिएको हुन्छ । यदि स्वास्थ्यमा समस्या देखिए उपचार, सुबिधा सम्पन्न कोरोना अस्पतालसम्म पु¥याइन्छ । कोरोना अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखेर उचार गरिन्छ । आइसोलेसन प्रयोग त्यतिबेला गरिन्छ, संक्रमितक रोगिको चपेटामा आइसकेपछि उनीहरुको उपचार भैरहेको समय अथवा उनीहरुमाकुनै रोगको संक्रमण भएको शंका हुन्छ । उनीहरु संक्रमण रोगिहरुको चपेटामा आउन नपाउन भन्ने गरि उपचार गरिन्छ । तसर्थ क्वारेन्टाइनमा बस्नु कुनै नराम्रो काम होइन, यहाँ बस्नु त सुरक्षित उपाय अपनाउनु हो । यहाँ बस्दैमा आतिनु पर्दैन क्वारेन्टाइनमा बस्दा हाम्रो सुरक्षाको ग्यारेन्टी सम्वन्धीतनिकायले गरेको हुन्छ । यदिजो कोहि कोरोना संत्रमण क्षेत्र भ्रमण, मजदुरी, बाटोको प्रयोग, साधनको प्रयोग गर्नुभएको छ र त्यस बखत कुनै पनि सुरक्षाको उपया अपनाउनु भएको थिएन भने तपाई क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् । क्वारेन्टाइनमा बस्नुलाई कुनै अपराधिककाम मानिदैन । क्वारेन्टाइनमा बस्दा आफु, आफ्नो परिवार, समाजमा महामारीग्रस्त हुनबाट बच्न सकिन्छ । यस बारेका सचेतना फैलाउनहामि सबै लागि परौ । कोरोनामहामारिबाट बच्नहामि सबै लागि परौँ ।
लेखकः– टेकमवली जिल्ला कार्यक्रम अधिकृत–नेरेसो दाङ जिल्लाशाखा
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७८ जेष्ठ ९, आईतवार ०५:१० गते २०७८ जेष्ठ ९, आईतवार ०५:४२ गते
मानसिंह विश्वकर्माजेठ ९ रोल्पा कोरोनाको भाइरसको महामारी तिव्र रुपमा बढिरहेको बेलामा विरामीहरुलाई अति आवश्यक पर्ने अक्सीजनको अभाव हुन नदिन रोल्पा र...
जातीय छुवाछुतमुक्त एवं बालीघरे खलोप्रथा अन्त्यका लागि सचेतना कार्यक्रम
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७६ जेष्ठ २५, शनिबार १५:४६ गते
पन्न रोल्पा समाचार जेठ २५ रोल्पा नगरपालिका वडा नं. २ को आयोजनामा बालीघरे तथा जातीय छुवाछुतमुक्त सम्बन्धी सचेतनामुलक अभिमुखीकरण कार्यक्रम शनिबार...
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७८ जेष्ठ ५, बुधबार १६:२५ गते
रोल्पा समाचारदाताजेठ ५ रोल्पा लिबाङ कोरोना भाइरस संक्रमण रोल्पामा तिव्र रुपमा फैलिरहेको बेलामा रोल्पा अस्पताल लगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानीयतहका आइसोलेशनमा अक्सिजन...
अखिल नेपाल महिला संघ रोल्पाद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७७ माघ २५, आईतवार १२:५४ गते
अखिल नेपाल महिला संघ रोल्पाद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्रमाघ २५ गते अखिल नेपाल महिला संघ रोल्पाले गृह मन्त्रालय, नेपाल सरकार,...